Posted By: KongoLisolowaa: Sebtember 28, 2019 00: 50 No Comments
Afrika waa qaarad ku nool hareeraheeda badan, oo ka kooban kumanaan dhaqameed, oo lagu dhisay sheeko ay tahay in loo sheego si aan loogu talagelin wiilasha iyo adduunka. Laga soo bilaabo ciidda Maghreb ilaa buuraha Kenya, laga bilaabo quruxda dalalaha Galbeedka Afrika si ay u kala duwanaato Cameroon, hantida DRC Shaqooyinka quruxda badan ee Koonfur Afrika, dadku waxay ku noolyihiin meelo kala duwan, caadooyin iyo caadooyin marmarka qaarkood loo isticmaalo si gebi ahaanba duwan.
Sababtaas awgeed, waa lagama maarmaan in la tirtiro taariikhda, qashinka sharaxaadaha ku saabsan caadooyinka qaarkood ee ku dhaqanka hadda jira ama ka yar mid ka mid ah dhamaadka qaaradda qaaradda kale. Tani waa inaad ka hadashaa xirashada dahabiga ku wareegsan dhexda.
Maadada dahsoon ee lagu qeexay, waxa loo yaqaan shayga yar ee jilicsan, oo qiimo leh maaddada ama shaqada. Ama mar kale, wax kasta oo xariif ah oo yar.
Wixii kiis ah oo nagu wajahan, waa midka ku wareegsan dhexda, inta badan ka samaysan qalabka dib u soo kabashada, dahab, dheeman, luul, iwm. Waanu qadarinaa farqiga marka ay horay u socotey haweeney calaamadisa.
Waa in la sheego in haweenku badanaa xiran yihiin dahab ah qaybtan jirka. Muddo dheer, dhaqanka Afrikaanka, luul waxaa loo isticmaalay daaweyn caafimaad. Waxaa loo isticmaalay in ay bogsiiyaan xannuunka dhabarka halka dekedda ay ka timaado kelyaha.
Qalabka dahabka ee su'aasha ah wuxuu noqon karaa qaab luul ah waxana loo yaqaan "Baya". Taariikhda luulnadu waxay la mid tahay bini-aadannimada, lakabada ugu da'da wayn ee la ogaaday waa ilkaha xayawaanka ah ee la jeexay oo lagu xidho sida silsilad, iyo taariikhda laga bilaabo 38 000 sano. Qalabyo kala duwan ayaa loo isticmaalay in lagu sameeyo luul: qolofka, dhirta, lafaha, boogaha, iwm.
Qalabka ugu caansan ee bixiya noocyo kala duwan ayaa ah galaaska. Haweeneyda, dekedda Baya waxay suurtogal u tahay in ay muujiso qaabkeeda iyo in ay soo qaadato muuqaal faa'iido leh isaga. Waxa kale oo ay sharraxaysaa dumarka iyo dareenka. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu hayo muraayadaha yaryar ee la xidho sida qashin qubka.
Inkasta oo ay jireen marxalado loo yaqaano lakabka sida Ghana, Nigeria iyo Mauritania, wax soo saarkooda ayaa ahaa mid aan muhiim ahayn. Sidaa daraadeed Pearls badankood Afrika ayaa laga soo dhoofiyay Hindiya, Shiinaha iyo Boqortooyada Roomaanka.
Pearls waxay ka mid yihiin muhiimada dhaqanka ee Afrika. Waxay gashan yihiin qoorta, qoob ka ciyaarka, dhegaha, miskaha. Qaarkood ayaa xitaa loo adeegsadaa cibaadada diineed sababtoo ah waxaa la siiyaa awood qarsoodi ah. Ugu dambeyntii, waxay calaamad u yihiin hantida waxayna badanaa u adeegaan calaamad muujinaysa darajada bulshada.
Calaamaduhu waxay leeyihiin shaqooyin badan. Waxay ka ciyaaraan door ilaalin, tan iyo markii hore waxaa loo isticmaalaa in lagu bogsado xanuunka kalyaha. Laakiin doorka naga xiiseynaya halkan inteeda badan, ayaa ah siyaabaha seduction.
Ujeedadaas awgeed, waxaa jira dhowr nooc oo garabyo ah. Tusaale ahaan, Senegal, DJAL DJAL waa silsilado yaryar oo lagu xidho tiro badan oo miskaha ah. Le FERL waxaa laga sameeyaa shinbiro waawayn, kuwaas oo baqshiishu sameeyaan buuq marka qofka xiran yahay.
Buuqu waa dabcan feker ahaan oo la rabay tan iyo markii ay soo jiidatay xiisaha iyo wicitaanada ra'yiga ragga ku jira.
Le M aqaarka sida isaga, waxa loola jeedaa silsiladaha fosfooraalka fosfooran ah, waxaanu kuu ogolaanaynaa inaad qiyaasi kartid kartidiisa. Iyo MÔRÔMÔRÔ waa mid caraf leh, waxaa la yiraahdaa waxay yiraahdaan si aad u sakhriso ninkii. Oo waa inaad adiga qudhaadu gurigaaga ku soo aragtaan. Dumarka HAA, tani ma aha in ay ku adkaato raaxaysiga qof kasta, laakiin kaliya ee ka mid ah kuwa adiga kaa tirsan.
Dareenkan, silsiladuna waa sida adiga oo kale. Isagu wuxuu samayn doonaa shuqulkiisa, iyo xooggiisa, iyo heediisa, iyo hadalkiisa toona; xurmada Bin Bin ! Wuxuu ku darayaa ciyaaraha seddexaad. Badanaa waxaa loogu yeeraa Baya oo ku taala Ivory Coast, Senegal iyo Mali, jewelkani waxa soo xareeya haween iyo gabdho badan oo African ah.
Waxaa loo isticmaalaa dhowr waxyaalood. Hore u caado ahaan, dhaqan ahaan baya waxaa loo isticmaalay sidii looga ilaalin lahaa sharnimada, laakiin maanta waxa loo adeegsanayaa hub sida seduction mass.
Baya ayaa lagu xiray kelyaha waxayna muujinaysaa rabitaan ah seduction, laakiin sidoo kale hanti si ay u muujiso dumarka Afrikaanka ah. Laakiin waa in la ogaadaa in aan sidoo kale ka heli karno finalkaan qaar ka mid ah dalalka Aasiya.
Rabitaankooda ragga, haweenku waxay sameeyeen habab badan oo seddex ah. Taasi waa marka Baya soo gashay. Qarsoodi oo ka timid hooyada ilaa gabadh.
Ragga badan, albaabka Baya waa qayb ka mid ah jirka haweenka Afrika iyo haween aad u yar ayaa ka baxsan kara.
Waxaan sidoo kale sameyn karnaa ekaysiin Qurxintaani silsilad dahab ah, dahab ah, xabkaha, biraha ama weli ku jira caag, dharka.
Waxa kale oo laga heli karaa midabyo kala duwan tan iyo markii doorashada labaad ee si weyn u ciyaaraan saameynta seduction ama seddexaad.
Aaway nebiyadii madowga / afrikaanka? "La'aan nebiyad, dadka madow / Afrikaanka ayaa la dagaallamaya kuwa dadka kale"
Sep27 08: 49